Qashinka lagu aaso cagaf SD7HW - Shiinaha Xuanhua Dhismaha Makiinado
bulldozer SD7HW waa 230 hooras dozer nooca-track la sprocket kacsantahay, awood drive wareeg, kontaroolada semi-adag ganaax iyo Haydarooliga. SD7HW-230 hooras, bulldozer sprocket kacsantahay dhexgalaan la design qaybsan waa u fududahay in la dayactiro & dayactirka, Waxaa Fayda saliid cadaadis kala duwan yihiin, nidaamka Haydarooliga qabto ee ilaalinta deegaanka iyo tamarta badbaadin leh hufnaan shaqo sare. Ammaanka xaalad hawlgalka raaxo leh, la socodka korontada iyo qol ROPS la isku halayn karo oo dhan qual ...
bulldozer SD7HW waa 230 hooras dozer nooca-track la sprocket kacsantahay, awood drive wareeg, kontaroolada semi-adag ganaax iyo Haydarooliga.
SD7HW-230 hooras, bulldozer sprocket kacsantahay dhexgalaan la design qaybsan waa u fududahay in la dayactiro & dayactirka, Waxaa Fayda saliid cadaadis kala duwan yihiin, nidaamka Haydarooliga qabto ee ilaalinta deegaanka iyo tamarta badbaadin leh hufnaan shaqo sare. Ammaanka xaalad hawlgalka raaxo leh, la socodka korontada iyo qol ROPS tayo lagu kalsoonaan karo oo dhan, adeeg fiican waa aad jeclaato kuwa caqliga leh.
SD7HW cadaadiska dhulka hoose waa mashiinka kahyraadka loo isticmaalo in looga hawlgalaa qashinka.
(ma ku jiraan ripper) miisaanka Operation ( Kg) 2 5670
Cadaadiska Ground (K Pa ) 51.96
Eeg Track (mm) 2235
Min. ansixin dhulka (mm) 484
Kooleeyay awoodda ( m ³) 13.4
Width daab (mm) 4382
Max. qodayaa qoto dheer (mm) 635
Cabbir Guud ( mm ) 5245×4382× 3482
Number of rollers side (dhinac kasta) 1
W idth of kabaha (mm) 760
Previous: Kacsantahay-wadidda cagaf SD9
Qolol-wadidda cagaf SD8N
Hydro-guurto ah cagaf SD5K
Kacsantahay-wadidda cagaf SD9